Faaqidaadda: Tahriibka Soomaalida Liibiya
Barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay Soomaalida tahriibka ah ee ku sugan dalka Liibiya.
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay dadka Soomaalida ah ee tahriibayaasha ee ku dhintay badda medtareeniyanka ee u dhaxaysa wadanka Libya iyo wadamada koonfurta Yurub, inkatsoo aysan jirin tiro sax ah oo laga hayo waxaa haddana la aamisna yahay inay gaadhayaan boqollaal.
Dadka arimahaasi tahriibayaasha sida dhow ula socda waxa ay sheegayaan in intii u dhaxaysay bilahii June ilaa iyo Septambar ee sanadkii 2009kii oo keliya ay badda ku dhinteen ilaa afar boqol oo qof oo Soomaali ahi, kadib markii ay dageen sadex doonyood oo ay la socdeen oo ay doonayeen in ay ku soo tahriibaan. Iyada oo sidaasi ah ayaa hadana waxaa wali ku sugan wadanka Libya ku dhawaad laba kun oo qof oo Soomaali ah oo badankoodu ku nool magaalada caasimada ah ee Tripoli oo doonaya in ay soo tahriibaan marka ugu horaysa ee ay u suurta gasho.
Barnaamijkan Faaqidaada Todobaadka waxaa magaalada Tripoli kusoo diraayiyey Cabdisalaam Ibraahim Hereri; waxaana ka qayb galaya General Ahmed Abdi Xaashi oo ku magcc dheer (Axmed Taajir) oo degan magaalada Birmingham ee ah caasimada labaad ee wadankan Britain iyo Dr Abdi Shire Warsame oo isaguna degan magaalada Leicester ee ku taalla badhtamaha Britain oo labadooduba ka qayb galayay shir ka dhacayay magaalada Tripoli iyo laba nin oo dhalintayo ah oo damacsan in ay soo tahriibaan oo kala ah Cali Mohamed Yusuf oo ku magac dheer Cali Qarjac iyo Yuusuf Farah Mohamed.
Barnaamijka ayaa u qeybsan labo qeybood.
Dhageyso Qeybta 1aad.
Dhageyso Qeybta 2aad.